သတင်းတွေကို အလွယ်တကူရှဲရင်းနဲ့ အမှားတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ သတင်းမှန်မမှန် စစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ပြောပြလာတဲ့ မေတိုးခိုင်….. – Cele Snap
ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ တူမချောလေးဖြစ်တဲ့ မေတိုးခိုင်ကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းထက်မှာ အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်းနေရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့အားပေးကူညီမှုကို ရရှိထားသလို ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းလည်းအပြည့်ရှိတဲ့ မေတိုးခိုင်က ငယ်ရွယ်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာပြီး ရဲရင့်သူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မေတိုးခိုင်က လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆိုရင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ မမောနိုင်အပန်းနိုင်အောင် ပါဝင်အားဖြည့်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေတိုးခိုင်က ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် စိတ်ခွန် အားဖြစ်စေမယ့် အားပေးစကားလေးတွေကိုလည်း အမြဲတမ်းပြောကြားပေးနေသလို အားလုံးနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် မေတိုးခိုင်က ပြည်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း အမြဲလိုလို မျှဝေ ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း မေတိုးခိုင်က သတင်းအမှားတွေကြောင့် မလိုအပ်တာတွေမဖြစ်ရအောင် ဆင်ခြင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကို သုံးသပ်ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေတိုးခိုင်က “ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့သတင်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ မရှဲဖို့အတွက် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်…. သတင်းတွေက အရမ်းများတော့ မလိုအပ်တဲ့နေရာကို အာရုံသွားစိုက်မိရင် တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အားလျော့သွားတာတွေ ဖြစ်စေမှာမို့ပါ 🙏…..တိကျတဲ့သတင်းတွေက နောက်ကျချင်ကျပါမယ် အချိန် နည်းနည်းယူပြီး စောင့်ပေးပါ…မန္တလေး ဒီနေ့ကျသွားတဲ့သမီးလေးရဲ့သတင်းဆို ကျသွားခါနီးမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံပိုင်ရှင်က ဖြေရှင်းလာပါပြီ.. ဖြစ်နိုင်ရင် သတင်းဘယ်လောက်ခိုင်လုံသလဲဆိုတာ တင်တဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ထိ လိုက်ကြည့်ပေးစေလိုပါတယ်…. ပိုင်ရှင်အကောင့်ရဲ့ history ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီသတင်းမှန်မမှန်နဲ့ Psywar တင်တဲ့အကောင့်လားဆိုတာ ခွဲခြားသိနိုင်မှာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙏” ဆိုပြီး သူမရဲ့Instagram Story မှာ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ပရိသတ်တွေလည်း သတိထားလို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source & Photo Credit -maytoekhine-mtk’s ig story
ပရိသတျအခဈြတျောမငျးသမီးခြော အိန်ဒွာကြျောဇငျရဲ့ တူမခြောလေးဖွဈတဲ့ မတေိုးခိုငျကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျးထကျမှာ အောငျမွငျစှာလြှောကျလှမျးနရေပွီပဲ ဖွဈပါတယျ ။ အဒျေါဖွဈသူရဲ့အားပေးကူညီမှုကို ရရှိထားသလို ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးလညျးအပွညျ့ရှိတဲ့ မတေိုးခိုငျက ငယျရှယျပမေယျ့ စိတျဓာတျ ခိုငျမာပွီး ရဲရငျ့သူလေး ဖွဈပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ မတေိုးခိုငျက လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောဆိုရငျ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ မမောနိုငျအပနျးနိုငျအောငျ ပါဝငျအားဖွညျ့ပေးနတော ဖွဈပါတယျ ။
မတေိုးခိုငျက ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှအေတှကျ စိတျခှနျ အားဖွဈစမေယျ့ အားပေးစကားလေးတှကေိုလညျး အမွဲတမျးပွောကွားပေးနသေလို အားလုံးနဲ့အတူ ရပျတညျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ မတေိုးခိုငျက ပွညျသူတှအေတှကျ အသုံးဝငျပွီး မှနျကနျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှကေိုလညျး အမွဲလိုလို မြှဝေ ပေးနတော ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး မတေိုးခိုငျက သတငျးအမှားတှကွေောငျ့ မလိုအပျတာတှမေဖွဈရအောငျ ဆငျခွငျရမယျ့နညျးလမျးတှကေို သုံးသပျပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ ။
မတေိုးခိုငျက “ခိုငျလုံမှုမရှိတဲ့သတငျးတှကေို လှယျလှယျကူကူ မရှဲဖို့အတှကျ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ…. သတငျးတှကေ အရမျးမြားတော့ မလိုအပျတဲ့နရောကို အာရုံသှားစိုကျမိရငျ တကယျလိုအပျတဲ့နရောတှမှော အားလြော့သှားတာတှေ ဖွဈစမှောမို့ပါ 🙏…..တိကတြဲ့သတငျးတှကေ နောကျကခြငျြကပြါမယျ အခြိနျ နညျးနညျးယူပွီး စောငျ့ပေးပါ…မန်တလေး ဒီနကေ့သြှားတဲ့သမီးလေးရဲ့သတငျးဆို ကသြှားခါနီးမှာရိုကျထားတဲ့ပုံပိုငျရှငျက ဖွရှေငျးလာပါပွီ.. ဖွဈနိုငျရငျ သတငျးဘယျလောကျခိုငျလုံသလဲဆိုတာ တငျတဲ့အကောငျ့ပိုငျရှငျထိ လိုကျကွညျ့ပေးစလေိုပါတယျ…. ပိုငျရှငျအကောငျ့ရဲ့ history ကိုလိုကျကွညျ့လိုကျရငျ ဒီသတငျးမှနျမမှနျနဲ့ Psywar တငျတဲ့အကောငျ့လားဆိုတာ ခှဲခွားသိနိုငျမှာပါ ကြေးဇူးတငျပါတယျ 🙏” ဆိုပွီး သူမရဲ့Instagram Story မှာ တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ပရိသတျတှလေညျး သတိထားလို့ရအောငျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲမှာ အသက်ပေးသွားကြ တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ဆက်လက်တော်လှန်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ G Fatt